Umtshakazi kaNikita Presnyakova wacaphukisa i-intanethi kwi-intanethi
Kungekudala, ngoJulayi 27, umtshato ka-Alla Pugacheva umzukulu kaNicita uza kwenzeka. Ukulungiselela umbhiyozo ugcwele. Kulindelwe ukuba le nto iya kuba ngumtshato ogqithiseleyo kunyaka okhoyo. Ipaparazzi sele isenza icebo lokufumana iifoto zokuqala kumtshato kaNikita Presnyakov no-Alena Krasnova.
Uvavanyo olunzima kukugqithisa umtshakazi kaNikita Presnyakov. Ukuba ilungu leentsapho ezidumileyo, intombazana kufuneka ibe ilungele ukuba inqaku ngalinye ngalinye liza kuxubusha iingxoxo phakathi kwabalandeli kunye nabangathandi. Yaye nayiphi na ukuhluleka kuya kuthathwa ngcaciso encinci kwiveki.
Ababhalisile u-Instalma u-Alena Krasnova baxabana ngenxa yokwenza kwakhe
U-Instagram u-Alena Krasnova akasayinanga abantu abaninzi - kuphela ngamawaka angama-38. Umtshakazi kaNikita Presnyakova akahlanganyeli kwimibonakalo kwaye akapapashi nantoni na imifanekiso emangalisa. Nangona kunjalo, ngolunye usuku kwi-microblogging yakhe i-scandal yangempela yavela.
U-Alena Krasnova wanquma ukuzama okuncinci nge-makeup. Le ntombazana yayisigxininisa emlonyeni oqaqambileyo kwaye yabelana ngesithombe nabhalisele. Ngokungafunekiyo, ababenzileyo bazenzela ingcambu yangempela kwiingxoxo.
Ababhalisi babecinga ukuba imilomo ka-Alena Krasnova ibonakala ingavuthi. Ukongezelela, iingcambu zeenwele ezigqithisiweyo zibangele imibuzo:
filippova_irisha_ Kodwa iinwele zinemibala, kunjalo, kufuneka
anna_dubrovskaya1989 @filippova_irisha_ ewe, akukho zikhwebu kuphela, zikhona izindebe zomlomo @ ts
evstigneevalexx Izindebe zangaphambili zazihle kakhulu, zibeke abantu! Kuyinto enyanyekayo, ungabhalisi
Omnye wabhalisi ba-Alena wammisela, ebonisa abagxekayo kwiingxaki zabo:
ok0508 @filippova_irisha_ wabhala ibhinqa elisuka kwilali ✔vot kuye kuye kodwa kungenakuphi na ukucebisa ngobuhle ukuba anike)) wena nje intloko ye-shampoo kufuneka uhlambe kuqala!
ok0508 @filippova_irisha_ kwaye izipikili zakho ziyingozi, zihlakulwa 😲 kodwa i-green verarn bl @ it smeared)) ihlekisiwe))
Ukuqhubela phambili kwiingxelo zaqala ukulwa. Amantombazana ahlambalazana, angabi neentloni ngamazwi. Ngexesha elifanayo, kubonakala ngathi wonke umntu uyalibalile malunga nesifundo sempikiswano. U-Alena Krasnov akazange asuse amazwana, abone ababhalisele ithuba lokunciphisa umninzi. Intombazana uNikita Presnyakova yaxoliswa ngokugxekwa kwidilesi yakhe:
u-alenaakrasnova ugijimela i-popcorn
UDmitry Peskov uya kumhalalisa uTatiana Navka emva komsebenzi
UJulia Snigir okhulelwe, unenkwenkwezi yokukhwabanisa
U-Anna Kalashnikova wayekhishwe ekuboniseni uBot Potkin
Ubuhle bemvelo bukaNatalia Vodianova obangele uhlazo lwe-Instagram
U-Natalia Podolskaya ucebise ukuba aqeshwe umcwangcisi, umfanekiso
UDmitry Shepelev ngokokuqala ngqa echasene nokulwa noyise kaZhanna Friske (ividiyo)
Indlela Yokutya Umntwana
Ukutshintsha umzimba womfazi ngexesha lokukhulelwa
Iingcebiso eziluncedo kunye nezilumko malunga nomdlavuza
Intombi yokuqala ye-Masha Rasputina
Unokwenza njani ukhilimu wekhaya?
Luhlobo luni lokutya umntwana olukhethiweyo
Amathoyizi amancinci: Tilda
Indlela yokulahla ubunzima obukhulu emva kokubeleka
Ziziphi iirhwebo ezinokuthotywa
Ucwangciso lokukhulelwa: apho uqala khona
Ukuqinisekiswa kwabasetyhini: ukudibanisa nokuzalwa okulula nokuphumelelayo.
Kutheni ukuphuhlisa izakhono ezincinci zezithuthi?
Umyeni wam unqabile indlela yokubuyisela umyeni wakhe: iingcebiso zengqondo yengqondo
Iinqanawa ezinamandla kunye nentliziyo yendoda
Ioli yeentlanzi ngeenwele